११.३४ अंक घट्योे नेप्से परिसूचक, करीब ३ अर्बको कारोबारमा अरुण कावेली पावरको सर्वाधिक हिस्सा
असोज २२, काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीवार शेयर बजार घटेर बन्द भएको छ । मंगलवारदेखि निरन्तर बढेको बजार बिहीवार नाफा बुकको असर देखिएको हो ।
कारोबारको ११ मिनेटमै १ हजार ६१४ विन्दु कायम गरेको बिहीवारको बजार अन्तिममा ११ दशमलव ३४ अंक घटेर १ हजार ५८९ दशमलव ६३ विन्दुमा झरेको छ । गत फागुन १५ पछि बुधवार बजारले १ हजार ६०० विन्दु पार गरेको थियो । बिहीवार बजार घट्नुको कारण अरु अन्यथा केहि नभएर सातामा तीन दिन बढेको बजारबाट नाफा कमाएकाहरुले यो दिन नाफा बुक गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।
विगत चार वर्ष निरन्तर घटेको बजारले गति लिन थालेको अवस्थामा कुनै दिन घट्यो भन्दैमा आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको लगानीकर्ताहरुको भनाइ छ ।
बिहीवार ठूला कम्पनीहरुको कारोबार मापक सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि १ दशमलव ६५ प्रतिशत घटेर ३१४ दशमलव ७४ विन्दुमा झरेको छ । यो दिन बजार घटेपनि कारोबार रकम भने करीब रू. ३ अर्ब रहेको छ । १९३ ओटा कम्पनीको बिहीवार ४८ हजार १९९ पटकको व्यापारमा रू. २ अर्ब ९० करोड ५० लाख ५७ हजार बराबरको कारोबार भएको छ ।
यो दिन कुल कारोबारमा सर्वाधिक हिस्सा अरुण काबेली पावरले ओगटेको छ । उक्त कम्पनीकोे यस दिन रू. १२ करोड ४१ लाख ८० हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको छ ।सर्वाधिक रकमको कारोबार गरेको उक्त कम्पनीकोे शेयरमूल्य यो दिन ६ दशमलव ३७ प्रतिशत अर्थात् प्रतिकित्ता रू. १७ ले घटेर रू. २५० कायम भएको छ । उक्त कम्पनीको यो दिन ४८ लाख ४७ हजार ६४ कित्ता शेयर कारोबार भएको हो ।
कारोबारमा आएका १२ ओटा समुहमध्ये वित्त समुहको परिसूचक सर्वाधिक ३ दशमलव ९१ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै लघुवित्तको शून्य दशमलव शून्य ३ प्रतिशत र म्युचुअल फण्ड समुहको शून्य दशमलव १४ प्रतिशतले परिसूचक बढेको छ ।
यो दिन वित्त समुहका लगानीकर्ताहरुले सर्वाधिक कमाएका छन् भने जलविद्युत् समुहका लगानीकर्ताहरुले सर्वाधिक गुमाएका छन् । परिसूचक घटेका नौ ओटा समुहहरुमध्ये सर्वाधिक परिसूचक जलविद्युत् समुहको ३ दशमलव शून्य ८ प्रतिशतले घटेको छ ।
यस दिन बैंकिङको शून्य दशमलव ६८ प्रतिशत, व्यापारको शून्य दशमलव २२ प्रतिशत, होटलको १ दशमलव ७१ प्रतिशत, विकास बैंक १ दशमलव शून्य १ प्रतिशत, निर्जीवन बीमा शून्य दशमलव ९३ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधन शून्य दशमलव ४३ प्रतिशत, अन्य शून्य दशमलव ५७ प्रतिशत र जीवन बीमा समूहको परिसूचक शून्य दशमलव २५ प्रतिशतले घटेको छ ।
वित्त समुहको सबैभन्दा बढी प्रतिशतले परिसूचक बढेको दिन बिहीवार सर्वाधिक मूल्य बढ्ने १० ओटा कम्पनीभित्र अधिकांश वित्त कम्पनीहरु रहेका छन् ।
यो दिन सर्वाधिक मूल्य बढ्ने कम्पनीहरुमा मल्टिपर्पस फिनान्स कम्पनी लिमिटेड, कर्णाली डेभलपमेण्ट बैंक, समृद्धि फाइनान्स, गोर्खाज फाइनान्स, ग्रीन डेभलपमेण्ट बैंक, गुहेश्वरी मर्चेण्ट बैंक एण्ड फाइनान्स, रिलायन्स फाइनान्स, बेष्ट फाइनान्स, आइसीएफसी फाइनान्स र सेञ्ट्रल फाइनान्स रहेका छन् ।
यी दश मध्य पनि मल्टिपर्पस फिनान्स कम्पनीको शेयरमूल्य सर्वाधिक १० प्रतिशतले बढेको हो । मल्टिपर्पस फिनान्सको शेयरमूल्य बिहीवार प्रतिकित्ता रू. १४ ले बढेर रू. १५४ पुगेको हो ।
यो दिन नौ प्रतिशतभन्दा बढीले कर्णाली डेभलपमेण्ट बैंक, समृद्धि फाइनान्स र गोर्खाज फाइनान्सको शेयरमूल्य बढेको छ । बिहीवार जलविद्युत् कम्पनीहरुको शेयरमूल्य सर्वाधिक घटेको छ । यो दिन सर्वाधिक शेयरमूल्य घट्ने १० ओटा कम्पनी सबै जलविद्युत् कम्पनीहरु रहेका छन् ।
सिनर्जी पावरको शेयरमूल्य यस दिन सर्वाधिक ७ दशमलव शून्य ८ प्रतिशतले गरेको छ । प्रतिकित्ता रू. १७ ले शेयरमूल्य घटेको सिनर्जी पावरको अन्तिम मूल्य यो दिन रू. २२४ कायम भएको छ ।
यो दिन सिनर्जी पावरसहित सर्वाधिक मूल्य घट्ने १० ओटा कम्पनीभित्र पाँचथर पावर, लिवर्टी ईनर्जी, रसुवागढी हाइड्रोपावर ,अरुण कावेली पावर, अपि पावर, हिमालयन पावर पार्टनर,घलेम्दी हाइड्रो, युनिभर्सल पावर, हिमालयन उर्जा विकास कम्पनी रहेका छन् ।
थप २२२५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, मृतकको संख्या ८४२ पुग्यो[२०७७ कार्तिक, ८]
पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई दम्पतीलाई कोरोना संक्रमण[२०७७ कार्तिक, ८]
क्लिनफिड प्रशारण मध्यरातबाट कार्यान्वयनमा आउँदै[२०७७ कार्तिक, ७]
प्रधानमन्त्रीद्वारा बडादसैंको अवसरमा राष्ट्रका नाममा सम्वोधन ( पूर्णपाठ )[२०७७ कार्तिक, ७]